CNC အလှည့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ CNC အလှည့် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. 1990 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝသောလက်ဆောင်တွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်, ငါတို့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှဆက်စပ်သည် CNC အလှည့် နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွက်တဆယ်နှင့်ဤလယ်ပြင်၌အတွေ့အကြုံကောင်းအပေါ်အားကိုးကျနော်တို့ကအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုရရှိဖို့နဲ့မှာအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများတစ်ဦးအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ပါပြီ Taiwan.
ပုံစံ - SJ-20
၄၅-ဒီဂရီ inclined bed design သည်ကောင်းမွန်သော chip ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပေးသည်,ပေါင်းစည်းပုံသွင်းခြင်းသည်ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီးလေးလံသောဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်သင့်တော်သည်.
မြင့်တယ်-တင်းကျပ်သော linear လမ်းညွှန်များသည်လျင်မြန်။ တိကျသောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းကိုရရှိစေပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်.
အမြင့်ကိုသုံးသည်-rigidity linear ရထားလမ်း,မြန်ဆန်တိကျသောဖြတ်တောက်နိုင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးစေသည်.
၄၅̊အိပ်ယာဒီဇိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သော chip ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်.
စက်၏ဒီဇိုင်းသည် ergonomics နှင့်ကိုက်ညီသည်,မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်တိကျမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အော်ပရေတာ၏ရွေ့လျားမှုကိုတိုးတက်စေသည်.
မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:၂၂၅ မီလီမီတာ
Chuck အရွယ်အစား:၆ လက်မ
X/Z Axis ခရီးသွား:၁၄၂/၃၂၅ မီလီမီတာ
မက်စ်.Spindle မြန်နှုန်း:၆၀၀၀ rpm
Coolant Tank ၏ Capacity:110L
3 မေးရိုးဟိုက်ဒရောလစ် Chuck:
Hard claw ၁ စုံ
နူးညံ့သောလက်သည်း ၁၀ စုံ
Chuck ညှပ်များအတွက် Foot switch သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-turning.html
အကောင်းဆုံး CNC အလှည့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC အလှည့် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ